ချင်းပြည်နယ်မှအပ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် Mobile Phone အသုံးပြုခြင်းနှင့် အင်တာ? - Yangon Media Group
ချင်းပြည်နယ်မှအပ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် Mobile Phone အသုံးပြုခြင်းနှင့် အင်တာ?
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၂-ချင်း ပြည်နယ်မှအပ ကျန်တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် Mobile Phone အသုံးပြုခြင်းနှင့် အင်တာနက်ကို လုံခြုံစိတ်ချစွာအ သုံးပြုနိုင်လာစေရေးအတွက် Mobile Seminar ပွဲများကို MPT မှ ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Mobile Seminar ပွဲများကို MPT ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာအသုံးပြုသူများ သာမက တခြားဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ အသုံးပြုသူများ အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ကျင်းပပြုလုပ် ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ယခု ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလမှစ တင်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မတ်လအထိ Mobile Seminar ပွဲပေါင်း ၁၁၀ ကို ကျင်းပပြု လုပ်သွားရန်စီစဉ်ထားရှိသည်။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ Deputy Chief Commercial Officer ဦးသိန်း ဟုတ်က “အင်တာနက်က သုံးတတ် ရင် တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဗဟု သုတတွေလည်းအများကြီးရှာလို့ ရတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာ လူမှု ရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာက အစ သုံးတတ်ရင်တကယ်ထိရောက် မှုရှိပါတယ်။ သို့သော်တချို့မရိုးသား သူတွေက လိမ်တာတို့ အယုံသွင်း ပြီးတော့ အနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေ မဖြစ် အောင် Mobile Seminar ပွဲ တွေကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကျင်းပပြု လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ် အနေနဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲတယ်။ မြေပြိုတောင်ပြိုတာ တွေကြောင့် ချင်းပြည်နယ်မှအပ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် အားလုံးမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာအရ Mobile Seminar ပွဲပေါင်း ၁၁၀ လောက်ကျင်းပသွား မှာပါ။ ချင်းပြည်နယ်မှာ Mobile Seminar ပွဲကျင်းပဖို့က ပွင့်လင်း ရာသီရောက်ရင် ပြန်စဉ်းစားသွား မှာပါ ” ဟု အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်က Sule Shangrila Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် သင့် လျော်မှုရှိသည့် Mobile Phone အသုံးပြုပုံနှင့် ကျင့်ဝတ်များ၊ အင် တာနက်လုံခြုံရေးနှင့် အွန်လိုင်းအ သုံးပြုခြင်းတို့တွင် မည်ကဲ့သို့လုံခြုံ စွာ အသုံးပြုရမည်ဟူသော အချက် များ၊ ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြိမ်း ခြောက်ခြင်းနှင့် နှောင့်ယှက်ခြင်းတို့ ကို မည်သို့ကာကွယ်တားဆီးရမည် ဆိုသောအချက်အလက်များအပြင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များ ကိုကာကွယ်ခြင်း အစရှိသောခေါင်း စဉ်များဖြင့် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ်တွင် အရက်သောက်ခြင်းမှ ပိတ်ပင်ထားမှုကို ဖောက်ဖျက်၍ လူပေါင်းသောင်း